Muuri News Network » SAWIRO:Wafdigii K/Galbeed ee Marka oo la kulmay Odayaal xili loo qabtay 24-saac gudahooda.
SAWIRO:Wafdigii K/Galbeed ee Marka oo la kulmay Odayaal xili loo qabtay 24-saac gudahooda.
Wafdigii maalmahanba ku sugnaa Degmada Marka ayaa kulkan la qaatay odayaal fara kutiris ah oo ka soo jeeda Beesha dhibka ku wada Degmada Marka ee Magaca qaranka dadka ku dhibaateeya.
Wafdiga kullanka la qaatay odayaasha ayaa ka koobnaa wasiiro, xildhibaano iyo weliba Gudoomiyaha Degmada Marka iyo ku xigeenka Gobolka xagga Maamulka iyo siyaasadda Mudane Xasan Shiine.Inta uu kullanka socday ayaa waxaa hadalo ka jeediyey masuuliyiintii ka qeybgalay kullanka.
Gudoomiye ku xigeenka gobolka Mudane Xassan Shiine oo hadalo kulul ka jeediyay ayaa u sheegay odayaasha in lagula xisaabtami doono dilalkii ay ciidanka qabiilka u abaabulan ay ka geysteen Degmada Marka iyo hareeraheeda.
Sidoo kale, dhamaan masuuliyiinta ayaa isku raacay in cidda kadagi la.dahay degmada ay iyaga yihiin isla markaana ay udulqaadan doonin ciddi ka sii wada degmada fowdo iyo xasilooni darro.
Beesha ay odayaashaas matalayeen ayaa daba kawada ciidamo fallaga ah oo aan haysan meel ay ku noolaadan hadii degmada ka dhalato nabad iyo xassilooni waarta. Waxa ay nolol iyo amaan ka dhigteen dilka iyo cabidda dhiiga shacabka degmada Marka.
Ugu danbeyntii wafdiga ayaa ballan qaaday in ay degmada ku soo dabaali doonan nabad waarta ciddi ka hor timaadana ay u aqoonsandoonan nabad diid sharcigana la tiigsandoonaan.
Wafdiga iyo odayaasha xaqdarro u dirirka ayaa kawada hadlay arimo xasaasi ah oo ay ka midyihiin dilalkii ay maalmihii ugu danbeeyay ciidamada militariga ka geysteen degmada marka.